Shiine Culayska Culayska Aluminium, Giraangir Fudud, Waxsoosaarka Aliminum Wheel Manufacture and Factory | Hanvos
Miisaanka Culayska Aluminiumka, Laydhka Fudud, Aliminum Laydhka
shay 2 Cad
Magaca Sumadda HANVOS QIEE
PCD 100 ~ 150mm
ET -9 ~ 79mm
Damaanad 3 sano ugu yaraan
Waxyaabaha Aluminium 6061 T6
Cabir 19 ~ 24 inji
Maaddaama ay tahay qaybta ugu muhiimsan ee giraangiraha, xarunta giraangiraha ayaa ah mid ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee lagu cabbiro tayada iyo heerka darajada baabuurka oo dhan.
Waayo, our wheel wheel wheel wheel, they have astaamaha nidaamka maareynta teknolojiyadda horumarsan iyo qalabka kormeerka iyo tijaabinta, kaas oo xaqiijin kara wax-soo-saar ballaaran, warshadeysan iyo baaxad weyn.
Alloy wheel wheel wheel with hight with high high, saamayn fiican iska caabinta daalka daalku waa xoog badan yahay, tayada iftiinku waxay yaraysaa tamarta dhextaalka ah, waxay yarayneysaa xawaaraha kaxaynta baabuurka, xawaaraha dheereeya, bareega si dhakhso ah, ku -tiirsanaanta heerkulka sare ayaa ah kala -daadinta kulaylka wanaagsan oo wanaagsan, waxqabadka, dheeraynta nolosha adeegga taayirada .
Alaab -daawaha wanaagsan ee nuugista nuugista shoogga, yareynta buuqa samp, hagaajinta raaxada gaariga.
Fadlan hubi moodooyinka soo socda ee xarunta taayirrada taayirrada.Waxay yihiin qaybo ka mid ah xarunta giraangiraha taayirrada, Sidoo kale waxaan ku siin karnaa xoqidda giraangirta sida cabirkaaga loo baahan yahay iyo daaweynta dusha.
Waxaan ku samayn karnaa caaryo ama maching CNC. Sidoo kale adiga ayaa ku siin kara adeegga CAD.
Haddii aad wax dan ah ka leedahay xarunta taayirrada taayirrada, fadlan si xor ah nala soo xiriir wixii faahfaahin ah.
Alaabooyinkayagu waxay daboolayaan basaska/ xamuulka alwaaxyada aluminium ee been -abuurka ah, baabuurka rakaabka ee alwaaxyada aluminium been -abuurka ah iyo sidoo kale mootooyinka alwaaxyada been -abuurka ah.
Hore: Giraanyada Been Abuurka ah ee Gawaarida Daawaha ah ee Gaarka ah
Xiga: Gaadhi Been Abuur ah/Wheel Been Abuur ah
Giraanyada Been Abuurka ah ee Gawaarida Daawaha ah ee Gaarka ah